Lany tsy ara-dalàna… hanao lalàna | NewsMada
Lany tsy ara-dalàna… hanao lalàna
Par Taratra sur 15/06/2019
Hanao ahoana ihany ny ho vokatry ny fifidianana solombavambahoaka? Havoakan’ny Ceni, anio, ny voka-pifidianana vonjimaika ofisialy. Efa azo tombanana sahady izay hahazo ny maro anisa. Na izany aza, mbola mahavalalanina sy mahafanina ny amin’ny fanoherana voka-pifidianana etsy sy eroa hoe noho ny fisian’ny raharaha tsy ara-dalàna: hosoka, hala-bato, kolikoly…
Amin’izany, andrasana ny voka-pifidianana ofisialy havoakan’ny HCC tompon’ny teny farany: iza avy ny ho voafidy? Mampitsanga-mitoetra be ihany tsinona izay fahasamponana izay amin’izao fifidianana izao: fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana, tsy fanarahan-dalàn’ny kandidà tsy misy sazy, kandidà mividy mpifidy, misy any am-ponja nefa mety ho voafidy…
Hanao ahoana ny ho tohiny sy ny hiafaran’ny zotram-pifidianana? Karazana fanambarana etsy sy eroa, fitarainana sy fitoriana… Mba misy azo raisina sy mitombina? Na tsy azo lavina fa nisy tokoa ny tsy fanarahan-dalàna hatrany am-piandohana… Mety nampalaina ny olom-pirenena avokoa izany, anisan’ny nampihena ny taham-pandraisana anjaran’ny mpifidy tamin’ny fandatsaham-bato.
Hanao ahoana izany rehetra izany eo amin’ny lafiny politika? Vitsy ny mpifidy nandatsa-bato; izay voafidy indray, ao ny lany amin’ny fomba tsy ara-dalàna. Manginy fotsiny ny hoe misy ny kandidà sasany tsy avy amin’ny antoko na vondrona politika nanolotra azy fa saika nosambotsamborina tetsy sy eroa mba hahazoan-toerana fotsiny aloha. Rehefa avy eo mifampitady?
Hanao ahoana ny ho fahamarinan-toerana politika amin’izany? Tsy hoe milamina sy tsara toerana fotsiny ny tsirairay amin’izany. Na tsy mitsingilahila na ahina hianjera fa ny hoe: tena hanao sy hahavita ny asa takina sy andrasana aminy ve? Hisolo vava ny vahoaka fa tsy ny fanjakana, hanara-maso ny asan’ny fahefana mpanatanteraka, hahay handrafitra tolo-dalàna… Ho hita eo.
Izay tsara fiainga no azo antoka fa ho lasa lavitra? Na izay ara-dalàna no manara-dalàna, izay madio no afa-kanadio… Tena hisy ve ny hoe fanovana sy fiovana?